Bavele enkantolo abasolwa ngokubulala isitabane | News24
Bavele enkantolo abasolwa ngokubulala isitabane
Johannesburg – Abesilisa ababili abathweswe icala lokudlwengula nokubulala isitabane saseSoweto esineminyaka engu-27 ubudala, uLerato Moloi, bavele eNkantolo yeMantshi eProtea ngoMsombuluko, kusho i-NPA.
Abasolwa ababili, omunye ongowaseLesotho kanye nowaseMalawi bavele kafuphi enkantolo, icala lahlehliselwa uJuni 4 ukuze kuqhutshwe uphenyo, kusho okhulumela iNational Prosecuting Authority uPhindi Mjonondwane.
ITimesLive ithe abasolwa bangoTsotang Petros Mokgethi noJacob Alofayo, kanti babobabili baneminyaka eko-30 ubudala.
Baboshwe ngemuva kwezinsuku ezimbalwa owesilisa owayegunda utshani ngasemzileni wesitimela eNaledi, eSoweto, ethole isidumbu ngeSonto, mhlaka- 14 Meyi.
OLUNYE UDABA: Owesilisa ugqeme omunye ngembazo emsola ngokujola nomkakhe
Umufi ikhanda lakhe lalimbozwe yizimbokodo kanti wayekhunyuliwe ibhulukwe 'nephenti'.
Bobaboli abasolwa bahlala eduzane nalapho kuhlala khona umufi futhi kuthiwa bebazana noMoloi.
Ngokombiko weSowetan, ngesikhathi bevela okokuqala enkantolo, ngoMeyi 17, oyedwa wabasolwa watshela inkantolo ukuthi uyazi ukuthi benze into ebhedayo.